LAGOS dia manome brasele an'ny Apple Watch izay mitentina 6.500 XNUMX Euros | Avy amin'ny mac aho
Tsy tiako ny firavaka. Indraindray aho dia mijanona eo alohan'ny fivarotana firavaka lafo vidy, mba hijery izay nasehon'izy ireo teo am-baravarankely. Fantatro fa tsara tarehy ny firavaka, ny sasany lehibe noho ny hafa, saingy manaloka zavatra betsaka amin'ny vidiny aho. Ary avy eo aho dia manontany tena hoe inona no mety hahatonga ny olona hanao kijana toy izany amin'ny brasele na peratra. Rehefa afaka segondra vitsy, ary rehefa hitako fa tsy hitako ny tendron'ny baolina, dia nijanona tsy nieritreritra momba azy aho ary nanohy ny diako.
Raha tsy ela dia manao mariazy na hetsika manokana ianao ary tsy te hisaraka amin'ny Apple Watch dia azonao atao izao ny miakanjo azy amin'ny bracelet somary "manokana": bracelet Lagos avy amin'ny fanangonana Smart Caviar. Fa amboary ny portfolio, satria 6.500 Euros fotsiny ny vidiny,….
Ilay mpanefy firavaka volamena avo lenta LAGOS dia nanolotra ny fanangonana braselezy vaovao ho an'ny Apple Watch antsoina hoe Caviar marani-tsaina. Ao anatin'izany no ahitantsika modely manokana toy ny fehin-tànana volamena 18 carat rose izay mitentina mihoatra ny 6.000 Euros.
Fantatra amin'ny endriny perla miavaka caviar, LAGOS dia namolavola Smart Caviar, fehin-tànana firavaka tsara indrindra ho an'ny Apple Watch, hanatsarana ny fisehoan'ny Apple Watch, ary hampiakarina azy amin'ny sokajy «firavaka».
LAGOS dia manana haba vaovao roa ho an'ny Apple Watch. Ny voalohany dia fehin-tànana 18k volamena raozy ary vy vy. Ny 38-40mm dia mitentina 1.900 42 Euros, raha 44-2.300mm kosa dia XNUMX Euros.
Fa raha tsy mahafa-po ny tsiro voadio ireo dia manana safidy somary lafo kokoa ianao amin'ny volafotsy 18 karat volafotsy sy fehiloha diamondra volamena, izay, araky ny anarany, dia misy firavaka diamondra amin'ny fehin-tànana ary vidiny «irery» 6,500 Euros. Mampalahelo fa tsy manome fihenam-bidy amin'ny "Zoma Mainty" izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » LAGOS dia manome bracelet lafo vidy ho an'ny Apple Watch izay mitentina 6.500 XNUMX Euros